IFlethi entle kunye neThulekileyo, iNdawo yokuHlala eBalaseleyo eneAircon! - I-Airbnb
IFlethi entle kunye neThulekileyo, iNdawo yokuHlala eBalaseleyo eneAircon!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPanagiota
Gqibezela i-loft enegumbi lokulala elahlukileyo, iWiFi kunye nekona enkulu yebhalkoni kuzo zombini, embindini kunye nendawo yesixeko! Ukuba zikhona, iibhayisekile ezimbini zokusetyenziswa simahla nazo zibandakanyiwe.
Indlu e-Alexandroupolis yakhiwe ngokutsha ngo-2013, malunga. I-40 yemitha yesikwere, ilula kakhulu, inegumbi lokuhlambela, indawo yokuhlala ibandakanya. ikhitshi kunye negumbi lokulala elahlukileyo, ilifti kunye nebalcony enkulu ngaphezulu kweendawo ezimbini eziphambili. Indawo yokuhlala sele ifakwe kwisofa, ibhedi, ikhitshi (ikhabhathi, isitovu, njl.njl).
I-Nice & Quite Apartment ikwindawo yokuhlala igqwesileyo kumbindi we-Alexandroupolis kufutshane neepaki nakwisitrato esincinci, ke uya kuba nakho ukulala ngeefestile ezivulekileyo ukuba uyathanda, kwaye umgama okufutshane kakhulu wokuhamba kuyo yonke into oyifunayo. Le ndawo ineekhefi ezininzi, iibhari, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela, iimyuziyam kunye nechweba elilula lendlu yesikhephe ekuphela kwesango lokungena kwisiqithi esihle saseSamothraki.
Ukusuka eNice & Quite Apartment, ungafika kuyo nayiphi na indawo ngokuhamba, iibhasi zedolophu okanye iiteksi ezifikelelekayo.
Isixeko sase-Alexandroupolis safumana malunga. I-70.000 yabemi, isikhululo seenqwelomoya, onokuthi ufikelele kwezinye iindawo zehlabathi ngeAthens. Isikhululo seBhasi esiseMbindini sinika unxibelelwano olululo kwezinye iindawo ezikufutshane ezifana neThessaloniki okanye iiPaki zeSizwe i-Evros Delta. Ngenxa yeSibhedlele seDyunivesithi esaziwayo i-Alexandroupolis sisixeko esityelelwe kakhulu ngabafundi kunye nesiqalo esithandwayo se-hoppers zesiqithi zamazwe ngamazwe.
I-Nice and Quite Apartment ibekwe embindini weyona ndawo intle yokuhlala kufutshane neepaki. Yindawo yokuhlala ethe kratya kwaye ikufutshane kakhulu kumbindi wesixeko, kwimizuzu embalwa yokuhamba umgama ukuya kwisiseko esifanelekileyo, njengeevenkile ezinkulu, iikhefi, iibhari, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela, iimyuziyam okanye izibuko leenqanawa ezilula.
Umbuki zindwendwe ngu- Panagiota
Ukuba kukho into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho, undazise.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alexandroupolis